Ahoana ny fomba hanampiana adiresy mailaka ao amin'ny LinkedIn | Martech Zone
Ahoana ny fomba hanampiana adiresy mailaka ao amin'ny LinkedIn
Zoma 30 Novambra 2012 Alahady 15 Janoary 2017 Douglas Karr
LinkedIn nanova ny fizarana Add Connections ary, raha ny hevitro, dia nanao ny dingan'ny fandevenana ny fomba fampidirana fifandraisana amin'ny alàlan'ny adiresy mailaka. Tsy azoko antoka hoe nanao an'io izy ireo fa dingana 4 izao fa tsy ireo dingana roa narahin'ny mpivady. Ity angamba no pejy notsidihiko indrindra tao amin'ny LinkedIn rehefa niverina avy nanao lahateny na fihaonambe aho. Mandalo ny karatra fandrahonan'ireo olona nangoniko sy mifandray aminy aho.
Ao amin'ny interface interface vaovao, hanampiana fifandraisana amin'ny alàlan'ny adiresy mailaka, ireto misy ireto dingana manaraka ireto:
Tsindrio Ampio fifandraisana eo an-tampon'ny havanana aorian'ny fidiranao amin'ny LinkedIn.
Tsindrio ny Izay mailaka rehetra kisary amin'ny ilany ankavanana.
Under Fomba maro hifandraisana, Tsindrio Asao amin'ny mailaka anao manokana.
Soraty ny adiresy mailakao ary kitiho Mandefasa fanasana.
Tags: manampy fifandraisanamailakaLinkedIn
Ireo mpivarotra fironana amin'ny fialantsasatra dia tsy afa-manoatra
Ny lisitry ny lisitry ny varotra an-tserasera amin'ny baiko laharam-pahamehana
Dec 1, 2012 amin'ny 11: 39 AM
Maninona raha mitady azy ireo amin'ny anarana fotsiny dia tsindrio ny connect?
1 Desambra 2012 à 1:18
Indray mandeha? Tsisy fika! Izany dia mamela ahy hanampy azy rehetra indray mandeha.
Dec 2, 2012 amin'ny 11: 57 AM
Eny, ity dia iray amin'ireo sehatra tsy hitovizantsika sy ianao. Tsy manampy olona amin'ny LinkedIn aho raha tsy hoe tena “mifandray” amin'izy ireo aho. Tsy lalao faobe ny hijerena hoe firy ny fifandraisana azoko.
Rehefa mandeha amin'ny hetsika iray aho METY hiverina ary hanampy olona dimy ho fifandraisana. Ny ambiny dia miditra amin'ny SalesForce na MQL na SQL.
2 Desambra 2012 à 12:22
Raha misy manome ahy ny kara-pandraharahany na nifandray tamiko tamin'ny alàlan'ny tranokala na tamin'ny mailaka dia mifandray izahay. Tsy manararaotra an'io fifandraisana io aho – fa amin'ny fitadiavana loharano dia tena ilaina indraindray. Tsy miraharaha ny isan'ny fifandraisana aho fa ny fahafahan'ny tambazotrako no raharahako. Ary miasa izany!